भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी किन आउँदैछन् नेपाल ? - Sudur Khabar
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी किन आउँदैछन् नेपाल ?
काठमाण्डौँ, असोज १७ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रोपटक नेपाल आउने निश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनी नेपाल आएका थिए। त्यसको तीन महिनापछि नै सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन मोदी २०७१ मंसिरमा काठमाडौं उत्रेका थिए। पहिलो भ्रमणका क्रममा उनले निकै चर्चा र प्रशंसा पाएका थिए ।
दोस्रो भ्रमण भने त्यस्तो हुन सकेन। संविधान जारी भएपछि भारतले एकतर्फी रूपमा नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालमा मोदीको लोकप्रियता घटेन मात्र, भारतविरोधी भावनासमेत बढ्यो। बिस्तारै त्यो चाप कम हुँदै सम्बन्ध सुमधुर हुन लागेको समयमा मोदी पुन: नेपाल आउन लागेका हुन्। छिमेकसँगको सम्बन्धमा जोड दिने बताउँदै आएका मोदीले आफ्नो आन्तरिक लोकप्रियताका लागि पनि नेपाल सम्बन्धलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेकाले सुधारका पक्षमा भारतीयहरू देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यसका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजको लगानी रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास उपयुक्त अवसर बन्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी करिब १ खर्ब १६ अर्ब लागतको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना उद्घाटन गर्न नेपाल आउन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मोदीले संयुक्त रूपमा आयोजना शिलान्यास गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालय भ्रमणको तयारीमा जुटेको छ। दसैं बिदाका बेला पनि मन्त्रालय भ्रमणको तयारीमा जुटिरहेको छ।
मोदीको भ्रमणको तिथि तय गर्नेबारे सोमबार सम्बन्धित निकायहरूबीच छलफल चलेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले आयोजना अघि बढाउन चासो देखाएपछि प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढेको अधिकारीहरू बताउँछन्। आयोजनाको शिलान्यास भारत र नेपालका कार्यकारी प्रमुखले संयुक्त रूपमा गर्ने सहमति प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नै भएको हो। भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तिथि टुंगो लगाउने विषय अन्तिम चरणमा रहेको बताए। ‘प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण जतिसक्दो छिटो हुनेमा दुई मत छैन, तिथि एकरदुई दिनमा तय हुनेछ ।
यसमा गृहकार्य भइरहेको छ,’ राजदूत उपाध्यायले भने, ‘भ्रमण गर्ने विषय गत महिना प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नै तय भएको हो।’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले पनि मोदीको भ्रमण हुनेमा दुईमत नभएको बताए। प्रदेश र संघको निर्वाचनअघि नै भ्रमण हुने गरी यसअघि नै छलफल भइसकेको उनले बताए। आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । नेपालले यो आयोजनाबाट एक सय ९८ मेगावाट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ।